एयरबस 32X को लागि अलास्का लिवरी?
प्रश्न एयरबस 32X को लागि अलास्का लिवरी?
1 वर्ष3महिना पहिले #1008 by pgde
के कुनै लुइस क्वेटरोको एयरबस 320 प्याकेजको लागि अलास्का लिभियर छ? यसले भर्जिन को प्रतिस्थापित गर्नेछ जुन अलास्कासँग विलय गरिएको थियो।
1 वर्ष3महिना पहिले #1009 by Dariussssss
तपाइँ Google मा यसको खोजी गर्न सक्नुहुन्छ। तर, F-Dore A320 को खोजी नगर्नुहोस्, केवल सजिलै PA एक्क्समक्स अलास्का लियोvery, मूलतः कारण हो, त्यो प्याकेज एक उन्नत परियोजना एयरबस A320 हो। यो मद्दतको आशा छ।